Olee otú jikwaa Music on iPhone Mfe
> Resource> Music> Olee otú jikwaa Music on iPhone Mfe
Dị ka ụtọ music na gị iPhone? Ọ bụrụ otú ahụ, i nwere ike mkpa a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ iji nyere ị jikwaa music on iPhone. Ọ bụrụ na ị agbasaghị iji iTunes, ị ga-doro anya na oge ọ bụla ị mmekọrịta gị iPhone na iTunes, ị ga-atụfu aga na music faịlụ gị iPhone. Mgbe ụfọdụ, i nwere ike na-aga crazy, karịsịa mgbe ị nwere obere n'uche ka ihichapụ ọ bụla song.
Ọ bụrụ na ị na-echegbu, ị nwere ike na-agbalị a usoro - Wondershare TunesGo (n'ihi na Windows ọrụ) ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac) (n'ihi na Mac ọrụ). Ma nsụgharị nke nke a usoro jikwaa iPhone music mfe. Ha eme ka i nwee mbubata music site na kọmputa gị iPhone, nyefee iPhone music ka iTunes na PC, nakwa dị ka Nhichapụ music on iPhone. Ugbu a, download nri version na kọmputa gị na-agbalị ya site onwe gị.
Iji aka jikwaa music on iPhone
Na akụkụ n'okpuru, anyị ga-na-Windows version dị ka ihe atụ. Ọ bụrụ na ị na-eji Mac version, ị nwere ike na-yiri nzọụkwụ dị ka mma.
Jikọọ iPhone gị na kọmputa na ẹkedori MobileGo
Ná mmalite, malite TunesGo na kọmputa gị. Jiri eriri USB jikọọ gị iPhone na kọmputa. Ka anya dị ka gị iPhone jikọọ, a usoro ga-chọpụta ya na mgbe na-egosipụta ya ke akpan window.
Jikwaa songs on iPhone: ibubata music site na kọmputa na-iPhone
Ugbu a, na-ekpe kọlụm, pịa "Media". Pịa "Music" iji bugote music management window. Mbubata music, pịa triangle n'okpuru "Tinye". Mgbe ahọrọ "Tinye File" ma ọ bụ "Tinye nchekwa". Mgbe ị na-ahọrọ gị chọrọ music faịlụ ma ọ bụ music nchekwa, ị kwesịrị ị na mbubata ha (ya). Ọ bụrụ na ị nwere Mac, ibudata TunesGo (Mac), iji nyefee music si Mac ka iPhone.
Jikwaa iPhone music: transfer music si iPhone / iPad / iPod ka iPhone
Ọ bụrụ na i nwere abụọ Apple ngwaọrụ, ị nwekwara ike nyefee music si iPhone / iPod / iPad ka iPhone. Jikọọ abụọ Apple ngwaọrụ gị na kọmputa. Mgbe ha na-ọma ejikọrọ, ị kwesịrị ị pịa "Media" ke Apple ngwaọrụ na ị chọrọ mbupụ music. Na media window, pịa "Music". Mgbe ahụ, họrọ gị chọrọ music faịlụ na pịa triangle n'okpuru "Export ka". Na ndọpụta ndepụta, họrọ mbupụ gị iPhone.
Cheta na: Ugbu a, Mac version anaghị akwado na-ebufe music n'etiti iPhone, iPad na iPod.
Jikwaa music on iPhone: Export iPhone music na kọmputa na iTunes
Ọ bụ nnọọ mfe mbupụ music ka iTunes na kọmputa. Ke akpan window, pịa "Export Music ka iTunes" ma ọ bụ "Export Music ka Computer". Mgbe ahụ, music na iPhone ga-exported.
Ma ọ bụ, na music management window, họrọ gị chọrọ music na pịa triangle n'okpuru "Export ka". Na esiri-ala menu, họrọ "Mbupụ na My Computer" ma ọ bụ "Mbupụ na iTunes Library". Ọ bụrụ na ị chọrọ mbupụ music ka iTunes, ị nwekwara ike pịa "Smart Mbupụ na iTunes. Site na ịpị nke a, ị dị nnọọ mkpa nyefee music faịlụ ndị na-adịghị na iTunes n'ọbá akwụkwọ.
Jikwaa music iPhone: ihichapụ music faịlụ na ogbe
Họrọ music faịlụ na ị chọrọ ka ihichapụ. Mgbe ahụ, pịa "Hichapụ".
Ndabere iPod Music gị na kọmputa ma ọ bụ iTunes
Esi Free Music on Android
The Best Sites ebe i nwere ike Download Christian Music Mfe
Olee Otú Ị Pụrụ Download Music si SoundCloud Mfe